Cornwall, akụ dị na England | Akụkọ Njem
Cornwall, akụ dị na England
Mariela Carril | | Nduzi, England
England Ọ bụ onye nwe ala dị egwu, mara mma, mpempe akwụkwọ ozi, ị gaghị ekwenye n'ezie na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke obodo ya, akụkọ ihe mere eme nke na-agafe n'obodo ya, akụ ọdịbendị o nwere. Otu n'ime ezigbo ebe a bụ Cornwall, otu n’ime iri-ano na-adịghị mma n'ógbè English.
Kọwaa Cornwall dị ka a akara aka dị oke ọnụ Ọ bụ okwu ekwesighi, na n'ezie mgbe isiokwu a gasịrị, ọ bụrụ na ịnọbeghị ebe ahụ, ị ​​ga-erite uru site na itinye ụbọchị ole na ole ebe a na ịmụrụ ndụ nke Bekee. Ka anyị gaa Cornwall.
2 Nleta Cornwall
England mejupụtara ógbè 47 ma otu n’ime ha bụ Cornwall. Ọ dị na ndịda ọdịda anyanwụ nke mba ahụ ma o nwere ụsọ mmiri n’Oké Osimiri Celtic na Ọwa Bekee n’onwe ya. Isi obodo ya bụ obodo nke Truro na ọdịbendị ha nwere mgbọrọgwụ Celtic.
N'ezie Cornwall ka a na-ahụta ka otu n'ime ihe a na-akpọ Mba CelticEnwere mmadụ isii ebe a, ma ọtụtụ ọdịnala ma ọ bụ omenala ha bụ nke ha ma ị gaghị ahụ ha n'akụkụ ndị ọzọ nke mba ahụ. N'ezie, asụsụ mbụ bụ Cornish, nke metụtara Breton na Welsh. Ọ dị ka asụsụ dị ndụ ruo na njedebe nke narị afọ XNUMX n'agbanyeghị na e nwere ụfọdụ taa mmaliteghachi.
A mara Cornwall dị ka ala nke tin, n'ihi na e nwere ndị ọgaranya bara ọgaranya n'oge ochie, mana mgbe ha kpọrọ nkụ ọtụtụ n'ime ndị bi na ya kwagara America na Austria ma ọ bụ New Zealand. Taa isi ọrụ bụ njem.
Englandbụ England ihe okike bụ na mpaghara ahụ jikọtara akụ na ụba na akụkọ ọdịnala yana ihe ndị mara mma na ọ dị mma. Ọ naghị akụda mmụọ. E nwere ebe obibi ochie, ụlọ, ebe a na-edebe ihe nkiri ụwa na ebe ngosi ihe mgbe ochie kamakwa ubi ndị mara mma, ugwu ugwu na osimiri mara mma.
Ka anyị bido ụfọdụ n’ime ha akụkọ ihe mere eme na-adọrọ mmasị. Ezigbo mma ụbọchị njem bụ ileta Lọ Pendennis. Ọ bụ otu n'ime nnukwu ebe ewusiri ike nke Henry VIII wuru ma hụ ọtụtụ esemokwu, ọkachasị n'oge Agha Obodo England. A na-enwekarị ọusụ na ọ banụ medụ oge ochie na ị nwere ike ịhụ egbe egbe Tudor na arụ ọrụ.
Bụkwa Mpako Prideaux, ụlọ mara mma na nke mara mma na Padstow Bay ma n'otu ahịrị ahụ Ugwu Edgcumbe, ya na ubi ya, ma obu Cotehele Mill, igwe ihe ochie nke na-egwe ọka maka ndị obodo na nke a ka nwere ike ịhụ na ọ na-arụ ọrụ ugboro abụọ n'izu. Manlọ ọzọ nke ndị ahụ bụ Ellọ Eliot Port ma ọ bụ ghostly mkpọmkpọ ebe nke Ormlọ Ezumike.
Anyị na-ekwu okwu tupu Ngwuputa ulo oru gara aga ma ọ bụrụ na nke ahụ na-adọrọ mmasị ị nwere ike ịga na Ogba mmiri nke East, etiti akụkọ ihe mere eme nke Cornish nke na-egosi nke ọma ihe ogbunigwe ga-adị ka oge ahụ. Ọzọ bụ m Ndị Levant, ya na igwe 1800 ya na ebe ya di: n’elu ugwu. Ebe nrụọrụ a bụ Ihe Nketa Worldwa.
Akụkọ na-amasị gị Eze Arthur? Ya mere, akwụsịkwa ijegharị na ya Intlọ Tintagel ebe a na-ekwu na a mụrụ eze akụkọ ọdịnala a, nke dị na ugwu ugwu ugwu dị na Cornwall. Castlọ ọzọ bụ Unlọ Launceston, ma ọ bụ ihe fọdụrụ na ya, nke Richard, Earl nke Cornwall wuru na narị afọ nke XNUMX, na nnukwu ụlọ elu ya.
Ma Cornwall bụkwa a ebe ezigbo mma mara mma ma mara amara karịsịa maka ya osimiri. Enwere ọtụtụ, ọtụtụ, ma na ndịda ụsọ oké osimiri na n'ebe ugwu. Anyị nwere ike ịkpọ ole na ole: Osimiri Porthmeor, Blue Flag 2019, dị mma maka igwu mmiri na sọọfụ, ọ bụ ezie na maka egwuregwu a nke kachasị mma, ebe oria a kpakpando nke Europe bu Fistral Beach, mechiri emechi na ọmarịcha Port Gaverne Beach ma ọ bụ na obosara na naanị inweta na ụkwụ Gwynver Beach.
N'akụkụ osimiri, Cornwall nwekwara ọtụtụ ubi, ogige ntụrụndụ na ọdịdị mee. Enwere Ogige Ubi nke Ugwu Porfell, na Ebe nchekwa Helman Tor Nature, South Coast Area nke Nnukwu Mma site na Marazion na Mount Bay ruo na mpụga Falmouth, ma ọ bụ kilomita ise King Arthur Walk nke malitere na Tentagel Church, rịgoro ugwu, wee soro ụzọ ndị dị n'ụsọ oké osimiri ndị na-eduga na ndagwurugwu na Strait Trebarwith. A mara mma.
Ma ọ bụghị naanị ịga ije n'akụkụ ugwu, na-elele osimiri ma ọ bụ na-eleta mkpọmkpọ ebe. N'ezie, ógbè ahụ na-enye ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ metụtara n'èzí: ebe a ị nwere ike ime amabama ọ bụ i nwere ike were dolphin na whale na-ele anya njem ụgbọ mmiri, kayak n’akụkụ osimiri Helford, azụ na ọdọ mmiri ma ọ bụ gaa ụgbọ mmiri.
Na mgbakwunye na nke a niile, ọ bụrụ naanị na ị ga-esi n'otu obodo gaa n'obodo nta, ị ga-enwe ike ọ nweghị onye ga-emechu gị ihu. Trurodịka ọmụmaatụ, isi obodo-ógbè. Ọ dị n'akụkụ osimiri nke otu aha ahụ, dị nnọọ nso n'ọnụ ọnụ nke Channel Channel. Nwere mara mma Katidral, cobbled n'okporo ámá na ọtụtụ ụdị ụlọ Georgian.
Katidral ahụ dị n'ụdị ndị Gothic ma were afọ iri atọ iji wuchaa ya, site na ngwụsị narị afọ nke iri na itoolu ruo na mmalite narị afọ nke iri abụọ. E wuru ya n’elu ụka ọzọ toro ogologo ma maa mma nke ukwuu. Truro bụ ezigbo mmalite n'ihi na ị nwere ike ịga ụka a Cornlọ ihe nkiri Royal Cornwall ịkọ akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị nke ógbè ahụ.
Ọ bụrụ na ị gaa na Septemba ị ga-ahụ Truro ejị Na fairs, nri, ọ drinksụ drinksụ na-eme ihe maka onye ọ bụla, ma ọ bụrụ na ị na-aga na December na Christmas decorations mara mma ma ọ bụrụ na ị na-aga na April e nwere Britain na oge ntoju na okooko osisi n'ebe nile.
Na ngwụsị, eziokwu bụ na England bụ otu ụgbọ oloko na ebe a na- oké njegharị ime ụgbọ okporo ígwè: ị nwere ike were St Ives Bay Line nke si St Erth gaa St Ives, gbagoo Looe Valley Line, site na Liskeard ruo Looe, na-agafe ndagwurugwu na osimiri, Maritime Line site na Truro ruo Falmouth, Atlantic Coast Line, si Akụkụ nke Newquay ma ọ bụ Line Valley Tamar na-ejikọ Plymouth na Gunnislake.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » England » Cornwall, akụ dị na England
Ihe ị ga-ahụ na Covarrubias
Ihe ị ga-ahụ na San Sebastián de la Gomera